Adihevitra ao Singapaoro: Tokony Hitovy ve Ny Tamby Omena Ny Olaimpika sy ny Paralaimpika Nahazo Medaly Volamena? · Global Voices teny Malagasy
Adihevitra ao Singapaoro: Tokony Hitovy ve Ny Tamby Omena Ny Olaimpika sy ny Paralaimpika Nahazo Medaly Volamena?
Voadika ny 21 Septambra 2016 4:36 GMT
Paralaimpika mpilomano, Yip Pin Xiu, nahazo medaly volamena roa tany Rio. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'i Yip Pin Xiu.
Nahazo medaly volamena roa tamin'ny lalao Paralaimpika 2016 i Yip Pin Xiu, Singaporeana mpilomana nalemy hatrany am-pahaterahana. Azo antoka ny hahazoany 200.000 dolara Singapaoro (146,000 USD) isaky ny medaly azony tao Rio de Janeiro.
Saingy mangataka amin'ny governemanta ireo mpanohana azy mba hanome azy $1,000,000 raha kely indrindra, masombola mitovy amin'ny azon'ilay mpilomano, Joseph Schooling, izay nahazo medaly volamena nandritra ny lalao Olaimpika tamin'ny volana lasa. Ankoatry ny nandreseny ilay mpilomano malaza, Michael Phelps, teo ihany koa ny nahazoany ny medaly volamena voalohany tamin'ny tantaran'ny fireneny.
Tian'ireo Singaporeana mpisera ny hanaovana fitondrana mitovy ho an'ireo Olaimpiana sy Paralaimpiana. Ny sasany aza nampahatsiahy ny manampahefana mihitsy fa i Yip Pin Xiu no nanome an'i Singapaoro ny medaliny volamena voalohany nandritra ny lalao Paralaimpika 2008 tany Beijing.
Tamin'izany fotoana izany, ny Sekretera Jenerelin'ny parlemanta, Teo Ser Luck, dia nanazava ny antony mahakely ny tamby nomena ireo Paralaimpiana miohatra amin'ny atolotra ireo tompondaka Olaimpika:
Iray amin'ireo zavatra raisinay anaty kajy ny hoe somary manana lenta hafa kokoa raha ny marina ny fifaninanana Olaimpika. Fifaninanana malalaka azon'ny rehetra andraisana anjara ny fifaninanana Olaimpika. Afaka miditra manao Olaimpika ireo Paralaimpiana. Saingy tsy afaka hifaninana amin'ny lalao Paralaimpika kosa ny Olaimpiana. Jerenay izay zavatra iray izay – ny lentan'ny fifanintsanana.
Somary midadasika kokoa ny fototra ao anatin'ny lalao Olaimpika raha somary kely ihany izany ho an'ny Paralaimpika no sady voatsinjara noho ny Paralaimpika mifototra amin'ny fahasembanana izay samihafa ny fanasokajiana azy. Noho izany misy haavonà fifanintsanana samihafa ao.
Ilay mpanao gazety fahiny, Claire Leow, tsy nanaiky an'io fomba fisainana io tao amin'ny pejiny Facebook, ka nanosika ny tokony hanomezana valisoa bebe kokoa ho an'ireo Paralaimpiana toa an'i Yip Pin Xiu:
Faly aho fa kely kokoa ny kianja — Faly satria manana kilema izay tsy irian'ny olona hanànan'izy ireo ny tsirairay amin'ireo enina mpifaninana. Saingy koa kianja midadasika io – misolo tena fotsiny ireo marobe manana fahasembanana henjana ka tsy ahafahan'izy ireny mirotsaka amin'ilay fifaninanana ireo enina ireo.
Raha atambatra, tsy azontsika refesina (na tambazana) fotsiny amin'ny vola ny ezak'olombelona, fa mikolokolo ihany koa fandefasana hafatra ratsy ho an'ny fiarahamonina ny fanohizana azy io. Raha dinihana, amin'ny maha-mpandoa hetra, manome ny anjarako ho an'ny fiarahamonina aho ary mba hanatanterahana izany, ara-potokevitra, tiako i Yip Pin Xiu sy ireo hafa atleta manana kilema mba hahazo valisoa mitovy.
Tohanan'ny Antokon'ny Mpiasa, avy amin'ny fanoherana ihany koa, ny fitakiana mba hanatsaràna ny valisoa omena ireo tompondaka Paralaimpiana :
Tsy tokony ho antony handavantsika ny fankasitrahana io Paralaimpiana sy fanomezana valisoa mendrika azy ireo ny havitsian'ireo afaka mifaninana amin'ny Lalao. Zo tokony ho azon'izy ireo fotsiny izany hoe mahazo fitondra mitovy tahàka ireo atleta Singaporeana mifaninana aminà sehatra ambony iraisampirenena izany.
Etsy andaniny, tsy rototra amin'izay vola kely ho azony i Yip Pin Xiu fa laviny ny filazana fa ireo atleta toa azy dia ambany noho ireo izay nifaninana tamin'ny lalao Olaimpika. Tao anaty tafa iray navoakan'ny gazety Today, nilaza i Yip Pin Xiu hoe :
Misy ihany koa ireo olona manana fijery miiba sy miteny fa ny medaly volamena Paralaimpikako) tsy azo ampitahaina (amin'ny medaly Olaimpikan'i Schooling) satria tsy heverin'izy ireo ho toy ny an'ireo tomombana ara-batana ny fanatanjahantenan'ireo manana fahasembanana.
Ny valinteniko ho an'ìreo [mpanakiana] dia hoe ezaka mitovy no ataonay mba hahatongavana amin'izay misy anay amin'izao fotoana izao ary tsy mora ny manao fanatanjahantena ho an'ny manana fahasembanana.
Noho izany, misy teboka iray adinon'ireo olona manao fampitahàna eto. Satria afaka mampiray ny fanatanjahantena, mitondra ny Singaporeana hitambatra ny medaly volamena azon'i Joseph. Antenaina fa hahavita toy izany koa ity medaly volamena Paralaimpiana ity. Izany no zavamahagaga ao anatin'ny fanatanjahantena.
Ao amin'ny Twitter, maro no mitaky fankasitrahana misimisy kokoa ho an'ny zavabita tsy mampino efain'i Yip Pin Xiu:
Tsy mampino ny tsy nanomezana ny voninahitra sahaza ho azy an'i #YipPinXiu na dia medaly volamena Paralaimpika roa aza no azony
Mendrika fankasitrahana misimisy kokoa noho i Joseph Schooling i Yip Pin Xiu. Nanamontsana ny zavabitany manokana erantany izy. Maninona no tsy asiana resaka intsony ny aminy?
Maninona no tsy misy fandefasana mivantana ny lalao Paralaimpika amin'ny fahitalavitra? NAHOANA? Nahoana no tsy averin-dry zareo aseho ny medaly volamena sy ny zavabita tsara indrindra erantany vitan'i Yip Pin Xiu ?
Mety handresy lahatra ny governemanta ihany ny tsindry avy amin'ny vahoaka. Taorian'ny nahazoany medaly volamena tamin'ny 2008, noheverina ho $100,000 monja no ho azon'i Yip Pin Xiu saingy nakarina ho $200,000 izany taorian'ny fileferan'ny governemanta noho ireo fanehoankevitry ny vahoaka.
2 andro izayKambodza
3 andro izayVietnam